March 2020 - MinSayYar
အောင်လအန်ဆန် တစ်ယောက် လက်ရှိ စားဝတ်နေရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးအတွက် အခက်အခဲဖြစ်နေမှုကို ပြောပြထားသည့် ရုပ်သံ
ဝယ်ယူစားသောက်ဖို့ဆန်မရှိ🍚,လေ့ကျင့်ဖို့အတွက်🏋🏻အားကစားခန်းမတွေကိုပိတ်ထားပေမယ့်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ ပြသာနာမရှိပါဘူး။ သေချာတာတခုကတော့ကျွန်တော်တို့၊ ဒီမသေချာမရေရာတဲ့အချိန်ကာလကိုအတူတူဖြတ်သန်းပြီးတော့၊အားလုံးအေးဆေးတည်ငြိမ်သွားတဲ့တနေ့ဖြတ်ကျော်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုအပြုံးနဲ့ပြန်လှည့်ကြည့်နိုင်မှာပါ😊။ No Rice 🍚 No Gym 🏋🏻 No problem! Seems like we are living in uncertain times but we will get through this. We will definitely look back at this and smile 😊. @itsmartiinn @tialzathang77 ဝယ်ယူစားသောက်ဖို့ဆန်မရှိ🍚,လေ့ကျင့်ဖို့အတွက်🏋🏻အားကစားခန်းမတွေကိုပိတ်ထားပေမယ့်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ပြသာနာမရှိပါဘူး။သေချာတာတခုကတော့ကျွန်တော်တို့၊ဒီမသေချာမရေရာတဲ့အချိန်ကာလကိုအတူတူဖြတ်သန်းပြီးတော့၊အားလုံးအေးဆေးတည်ငြိမ်သွားတဲ့တနေ့ဖြတ်ကျော်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုအပြုံးနဲ့ပြန်လှည့်ကြည့်နိုင်မှာပါ😊။No Rice 🍚 No Gym 🏋🏻 No problem! Seems like we are living in uncertain times but […]
အီတလီကတော့ စိတ်မကောင်းစရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို ချမှတ်လိုက်ပါပြီ
အီတလီကတော့ စိတ်မကောင်းစရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို ချမှတ်လိုက်ပါပြီ။ အဲ့ဒါကတော့ အသက် ၈၀ နဲ့ အထက်အရွယ်တွေ၊ နောက်ပြီး ရောဂါအခံတစ်ခုခု ရှိနေသူ သက်ကြီးပိုင်းတွေကို ဆေးကုသမှု ဆက်မပေးတော့ဘဲ သေခွင့်ပေးလိုက်ဖို့ပါပဲ။ လက်ရှိမှာ ကုသရမှုတွေက လက်မလည်နိုင်အောင် ဖြစ်လာတဲ့အပြင် ဆေးရုံတွေမှာ နေရာလွတ် လုံးဝမကျန်တော့အောင် လူနာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်သွားပြီလို့လည်း တူရင်မြို့မှာ တာဝန်ကျနေတဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်က ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ ပြန်လည်ကောင်းမွန်နိုင်ခြေရှိတဲ့ လူနာတွေကိုသာ ဦးစားပေးပြီး ကုသမှုဆောင်ရွက်သွားတော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေကတော့ နားလည်ပေးဖို့ပဲ ပြောထားပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဘယ်သူ့ကိုမှ လက်မလျှော့ချင်ပေမယ့် အခြေအနေတွေက တစ်ခုခုကို ရွေးချယ်ဖို့ တိုက်တွန်းနေပြီလို့ တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်က ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ ကြည့်ရတာ ဒီကပ်ရောဂါဆိုးအတွက် အီတလီဟာ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို စတေးတော့မယ် တူပါရဲ့။ #Credit# ======================== […]
ထိုင်းရောက်မြန်မာများ ဧပြီလကုန်အထိ ခေတ္တပြန်မလာရန် ထုတ်ပြန်ကြေညာ
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာအလုပ်သမားများအနေဖြင့် မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ခေတ္တခဏပြန်လာခြင်းမလုပ်ရန် မြန်မာသံရုံး(ဘန်ကောက်) မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာသည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကို ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို တင်းကြပ်စွာဆောင်ရွက်နေသလို ထိုင်းနိုင်ငံတွင်လည်း ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအဖြစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်များဖြစ်သော လေဆိပ် ၊ ရေဆိပ် ၊နယ်စပ်ဂိတ်များမှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်လာသည့် ခရီးသည်များ၏ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများကို အထူးကြပ်မတ်စစ်ဆေးလျှက်ရှိသည်။ အလားတူ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ စက်ရုံအလုပ်ရုံများတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ရေးစီမံချက်များချမှတ်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်သည့်အတွက် အလုပ်သမားများ ခရီးသွားလာခြင်းကို အားမပေးလိုသောကြောင့် သြင်္ကန်ကာလနေရပ်ပြန်အလုပ်သမားများအား ထိုင်း Re-entry Visa ကြေးကို ယခင်နှစ်များကကဲ့သို့ ကင်းလွတ်ခွင့်မပေးတော့ပဲ ဘတ်တစ်သောင်းကောက်ခံမည်ဟု ထိုင်းအစိုးရက သတ်မှတ်ထားသည်။ ယင်းအတွက်ကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာအလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာရေး ၊စီးပွားရေး ၊လူမှုရေးအပြင် အလုပ်သမားမိသားစုဝင်များ၏ […]
ဂီတအလုပ်တွေ ဆက်တိုက်လုပ်နေပေမယ့် သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကို လက်လွှတ်မှာ မဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြောလာတဲ့မေ
သီချင်းတွေ ဆိုနေရရင် ပျော်တယ်။မေဟာ ဂီတအလုပ်တွေ ဆက်တိုက်လုပ်နေပေမယ့် သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကို လက်လွှတ်မှာ မဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြောလာပါတယ်။ ဂီတအလုပ်တွေကို တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ဆောင်လာနေပြီဖြစ်တဲ့ မေ ကတော့ တစ်ချိန်တုန်းက သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ် ဇာတ်ကားတွေ ရိုက်ကူးခဲ့ဖူးပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ မေ ကို ပရိသတ်တွေက အဆိုတော်တစ်ယောက်အဖြစ် ပိုအားပေးလာတဲ့အပေါ် သူ့ရဲ့ ခံစားချက်ကိုအခုလို ပြောပြလာပါတယ်။ “အနုပညာလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ အဆိုတော် တစ်ယောက်ဆိုတာထက် သရုပ်ဆောင်အလုပ်တွေလည်း နည်းနည်း လုပ်ဖြစ်နေပါသေးတယ်။ ရုံမတင်သေးတာပဲရှိတာပါ။ အဆိုတော်တော်တစ်ယောက်အနေနဲ့ သီချင်းတွေဘာတွေ လုပ်နေရရင်ပျော်တယ်။ ပွဲတိုင်းတော့ မဆိုဖြစ်ပေမယ့် ရှိုးပွဲတွေတော့ ဆိုဖြစ်တယ်။ ဒီလိုအနေအထားလေးကို ပိုသဘောကျတယ်။ အဓိက ကတော့ကိုယ့်အရည်အချင်းကို ပြရတဲ့အရာကို ပိုကြိုက်တယ်။ မော်ဒယ်အလုပ် လုပ်နေရတုန်းကထက် အဆိုတော် သရုပ်ဆောင်အဖြစ် ရပ်တည်ရတာကို ပိုနှစ်သက်တယ်” ဆိုပြီးတော့ အင်တာဗျူးမှာ ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။ မေ […]
ကြိုးစားမှုတွေနဲ့ အနုပညာချပြမှုတွေဟာ သဲထဲရေသွန်သလို ဖြစ်နေရတာကြောင့် စိတ်ထိခိုက်နေရတဲ့ စိုင်းစိုင်း
ကြိုးစားမှုတွေနဲ့ အနုပညာချပြမှုတွေဟာ သဲထဲရေသွန်သလို ဖြစ်နေရတာကြောင့် စိတ်ထိခိုက်နေရတဲ့ စိုင်းစိုင်း နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေ ရဲ့ အသည်းကျော် နာမည်ကြီး အဆိုတော်ဖြစ်တဲ့ စိုငိးစိုင်းခမ်းလှိုင်ကတော့ ရုပ်ရှင်ဘက်ပိုင်းမှာ ပထမဆုံးထုတ်လုပ်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ”ပိတောက်ကတဲ့ ဂီတ”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဟာ မတ်လ(၅)ရက်နေ့မှာ စတင်ပြသခဲ့ပြီး လက်ရှိ ရုံတင် ပြသနေပေမယ့် လူဝင်ကြည့်ခြင်းမရှိတော့တာကြောင့် ဝမ်းနည်းမိတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ သူ့ရဲ့ ဆန္ဒလေးတွေကို မတ်လ (၁၅)ရက်နေ့မှာတော့ သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာပေါ်မှာတင်လာခဲ့ပါတယ်..။စိုင်းစိုင်းက သူ့ရဲ့ ရင်တွင်းခံစားချက်လေးတွေကို ”ရုပ်ရှင်ရုံတွေကို တခြားပွဲလမ်းတွေလိုပဲ တရားဝင်ပိတ်ပေးလိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲ။ ဒီအခြေအနေမှာ ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လာကြည့်ပါလို့လည်း ပရိသတ်ကို အတင်းမကြော်ငြာ မတိုက်တွန်းချင်ဘူး ။ ပိတ်လိုက်ပြီး အခြေအနေကောင်းမှ အေးဆေးပြန်ပြခွင့်ရချင်မိတယ်။ အခုအတိုင်းကတော့ လူမရှိဘဲ ဆက်ပြ ပြီးရင်ဆင်းပေးရမယ်။ ပြန်ပြလို့မရတော့ပါ။ နောက်ပြမယ့်ကားတွေလည်း ဘယ်လိုလုပ်မယ်မသိဘူး ။ကျွန်တော် Birthday Show ဆိုရင် […]
(Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန်) စုဗူးလေးတွေထဲက ကျခဲ့ရတဲ့ဝမ်းနည်းမျက်ရည်တွေပါ…စာလေးဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ…. “ပြီးခဲ့တဲ့ ၃ ရက်ကပေါ့ ကျမ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသွားနေကျမြတ်စောညီနောင် ဘုရားမှာကိုရင်လေးတွေအုပ်စုစုဗူး လေးတွေပွေ့လို့ ပြေးလွှားပြီးလာကြတာ။ကိုရင် တို့စုဘူးတွေနဲ့ဘာလုပ်တာလဲလို့ မေးတော့ တပေါင်းပွဲ ကျရင် ရီမု ကားလေးတွေ ဝယ်ချင်လို့တဲ့တပည့်တော်ကိုပြပါအုံးတစ်ပါး ဘယ်လောက်တောင်ရပြီလဲ မေးတော့ ပြကြတယ်။ အထဲကို မျက်စိလေးတစ်ဖက်မှိတ်ပြီးချောင်းကြည့်လိုက်တော့ တော်တော်နဲ့ခေါင်းပြန်မမော့နိုင်ဘူး ရင်ထဲမှာ အလုံးကြီးစို့တက်ပြီးမျက်ရည်တွေ ထိန်းလို့မရအောင်ကျမိတယ်… ဘာလို့ကျမိလဲဆိုတော့ မြင်လိုက်ရတဲ့ စုဗူးလေးထဲကဟောင်းနွမ်းစုတ်ပျက်နေတဲ့ ၅၀ တန်လေးတစ်ရွက်ကြောင့်ပါဘဲ။ ဘယ်လိုလုပ်များ ရီမု ကားလေးတွေဝယ်ကြမှာလဲ မြတ်စောညီနောင်ဘုရားမှာတပေါင်းပွဲတော်ကြီးကလည်း နီးနေပြီလေ ရင်ထဲမှာ ပြောမပြတက်အောင်ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ဘဲ ကိုရင်လေးတွေကိုခေါ်ပြီးကိုရင်တို့ သောကြာ နေ့လည် ၁၂ နာရီ ကျရင်ဒီဆိုင်လေးမှာ လာစောင့်နေ တပည့်တော်ရီမုကားတွေ ဝယ်ပီးလာခဲ့မယ်လို့မှာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ သောကြာ နေ့ နေ့လည်မှာအခမ်းနားတစ်ခုတက်ရောက်ဖို့မမျှော်လင့်ဘဲပေါ်လာပါတယ်။ ကျမလည်း […]
ပရိတ်သတ်တွေကို surprise လုပ်ပေးဖို့ စီစဥ်နေတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်😍
ပရိတ်သတ်တွေကို surprise လုပ်ပေးဖို့ စီစဉ်နေတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်😍 နာမည်ကျော် ဟာသ သရုပ်ဆောင် လူရွှင်တော် ခင်လှိုင်ရဲ့အငယ်ဆုံးသမီးလေးဖြစ်တဲ့ သဇင်ထူးမြင့်ကတော့ ဖခင်ရဲ့ခြေရာကိုနင်းပြီး အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်သလို ပရိသတ်တွေကလည်း သူမကိုအရမ်းချစ်ကြပါတယ် ။ အကယ်ဒမီရွှေကြိုအဖြစ် အနုပညာခြေလှမ်းအစပြုခဲ့တဲ့ သူမကတော့ အခုဆိုရင် ကြော်ငြာတွေအပြင် ဇာတ်လမ်းတွဲတွေလည်း ရိုက်ကူးနေပြီဖြစ်ပါတယ် ။ လတ်တလောမှာတော့ သဲတစ်ယောက် Feelre Korea နဲ့ပူးပေါင်းပြီး ပရိသတ်တွေကို Surprise တိုက်ဖို့ကြံစည်နေတယ်လို့သိရပါတယ် ။ သဲနဲ့ Feelre Korea တို့ ရဲ့ အထူးခြားဆုံး Activites လေး လုပ်ဖို့ရှိနေလို့ ဘာအစီအစဉ်ဖြစ်မလဲလို့ ပရိသတ်တွေကို ခန့်မှန်းခိုင်းလိုက်ပါပြီနော် ။ ” မင်းသမီးလေးရေ မင်းရဲ့ ဖြူစင်တဲ့ အလှနဲ့ လောကကြီးတစ်ခုလုံးက မိန်းခလေးတွေကို မင်းလို လှအောင် […]
တိတ်တဆိတ်နောက်အိမ်ထောင်ပြုနေတဲ့ခင်ပွန်းကို ပှကျပှကျဆူနေတဲ့ရေနွေးတွေနဲ့ လောင်းပစ်လိုက်တဲ့ ဇနီးသည်ရဲ့ လုပ်ရပ်
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ အသက်33နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးဟာ သူမ၏အသက်28နှစ်အရွယ်ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှာ အခြားအိမ်နီးချင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်တိတ်တဆိတ်လက်ထပ်ထားသည်ကို သိရှိပြီးနောက် စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ပြီး ဒယ်အိုးထဲတွင်ရေကိုပွတ်ပွတ်ဆူအောင်သည်ကာ သူမတို့အိပ်ခန်းထဲတွင်အိပ်နေသော ခင်ပွန်းသည်အပေါ်သို့ လောင်းချပစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဇနီးသည်၏ပြောပြချက်အရ – ပြစ်မှုကျူ းလွန်ချိန်မှာ သူမဘားမှမစဉ်းစားနိုင်တော့ဘဲ စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေတာကိုသာသိရှိခဲ့ပါတယ် ။ သူမ၏ခင်ပွန်ဟာ ပိတ်ရက်တွေမှာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး ၊ အိမ်ကိုလည်း မပြန်လာပါဘူး ၊သူမ၏ကလေး3ယောက်ကို ကျွေးမွေးဖို့အတွက် အဆိုပါအမျိုးသမီးဆီမှာတောင် ပိုက်ဆံချေးယူခဲ့ကြောင်း ရင်ဖွင့်ပြောပြထားပါတယ် ။ ရဲအရာရှိတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရ ခင်ပွန်းသည်ဟာတိုင်းရင်ဆေးတွေနဲ့ကုသမှုခံယူခဲ့ပေမဲ့ ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ နောက်6ရက်အကြာမှာတော့ သေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ် ။ ဇနီးသည်ဖြစ်သူမှာ ခင်ပွန်းသည်ကိုစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ခြင်းသာဖြစ်ပြီး ၊ သေဆုံးသည်အထိမရည်ရွယ်ခဲ့မိကြောင်း ဖြောင့်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ် ။ ရဲအရာရှိများကတော့ သူမဟာလူသတ်မှုကျူ းလွန်ခဲ့တဲ့အတွက်အများဆုံးထောင်ဒဏ် 15 နှစ်ကျရောက်နိုင်ပြီး ၊ လူသတ်ရန်ကြိုတင်ကြံစည်ထားခဲ့သည်ဟု ဆုံဖြတ်ချက်ချခဲ့ရင်တော့ တစ်သက်တစ်ကျွန်းချမှတ်ခံရနိုင်ကြောင်းကြောင်း ပြောဆိုထားပါတယ်။ သူမဟာ အိမ်တွင်းရေးအကြမ်းဖက်မှုအတွက်ပါ စွဲချက်တင်ခံခဲ့ရပါတယ် ။ Jasmine […]
15th March 2020 Admin
” ရင်တွေပူလို့ ရေလေးတစ်ခွက်လောက် သောက်ချင်တယ် ပြောပေမယ့် ခွဲစိတ်ထားလို့ ရေလေးတစ်ခွက်တောင် သောက်မသွားရရှာဘူး”
အေး…….အေး…….မနာတော့ဘူး ….မနာတော့ဘူးနော် …..ညီမလေး ……….ညီမလေးခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဗုံးစ ၃၀ လောက် ဆွဲထုတ်လိုက်ရတယ် တဲ့ ဒေါက်တာက ရှင်းပြနေတယ်။ ” ရေ ပေးပါ ရေ ပေးပါ…..” တဲ့ ရင်တွေ ပူလွန်းလို့ ညီမလေးက ရေတောင်းတော့ဒေါက်တာ က ခေါင်းခါပြတယ်။ခွဲစိတ်ထားတာ ရေတိုက်လို့ မရဘူးတဲ့။ရေ လေးတောင် မတိုက်လိုက်ရဘူး။ဟုတ်တယ် ။ကျွန်မ ညီမလေး ကို ရေလေးတောင် မတိုက်လိုက်ရဘူး။ဒီလက်နက်ကြီးကို AA ပဲ ဖြစ်ဖြစ် တပ်မတော်ကပဲ ဖြစ်ဖြစ် အိုး………ဘယ်သူပဲ ပစ်လိုက် ပစ်လိုက် ကျွန်မ မသိချင်တော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ညီမလေး ကို ရေလေးတော့ တိုက်ချင်မိတယ်။ဒေါက်တာရယ် ညီမလေး ကို ရေလေး တိုက်ပါရစေ………….နော်။နော် ………….နော်။အေး …….အေး……..ညီမလေး မနာတော့ဘူး မနာတော့ဘူးနော် […]
Wheel Chair လေး အလှူခံပါရစေ
ပုံပါ လူဟာ ရိုးဂိုး၊ ဖားအောက်ရွာ၊ မော်လမြိုင်မှာနေထိုင်တဲ့ မွန်လူမျိုးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် … မိဘမွေးလာတုန်းကတော့ အကောင်းပါ …လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ လောက်က ယိုးဒယားနိုင်ငံမှာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားလုပ်ရင်း အထပ်မြင့်တိုက်ပေါ်က ပြုတ်ကျလို့ ခါးရိုးကျိုးပြီး အောက်ပိုင်းသေသွားခဲ့ရပါတယ် …( အဲ့ခေတ်တုန်းက ဆေးပညာမမြင့်သေးတာလဲပါမယ် )လက်ရှိ သူသုံးနေတဲ့ Wheel Chair လေးကလည်းသံချေးအလိမ်းလိမ်း အဖာတစ်ရာနဲ့ အနှစ် ၂၀ သက်တမ်း လောက်ရှိပါပြီ … အရင်ကတော့ အသက် ၈၀ ကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အမေအိုက ထမင်းချက်ပြုတ်ကျွေးပါတယ် …ဒါပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကပဲ အမေအိုကြီးဆုံးသွားခဲ့တာကြောင့် သူ့ဘာသာ ဖြစ်သလိုချက်စားနေရပါတယ် … သူက ထိုင်ရာကနေ တုတ်တစ်ချောင်းနဲ့ အလုပ်လုပ်တယ် …ဝါးနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ လက်မှုပညာလည်း တတ်ပါတယ် …အခု ဝါးရှားပါးလာတဲ့အတွက် သိပ်မလုပ်ဖြစ်တော့ပါဘူး … […]